Wararka Gudaha – Page 97 – Shabakadda Amiirnuur
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo usbuuciiba maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan. Waxaa lagu falanqeeyaa mowduuc muhim ah oo waliba loo dooro xilli ku haboon. Maanta waxaa barnaamijka lagu lafa guray weerarkii ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa DF ku qaadeen caruurtii wax ku baranaysay […]
Xukun xad gacan goyn ah ayaa maanta galinkii dambe ka dhacay degaanka Kuunyo-barrow ee gobolka Shabeelaha hoose, iyadoo ay usoo daawasho tageen dad weyne badan. Xukunka ayaa waxaa lagu fuliyay labo nin oo lagu eedeeyay iney jabsadeen dukaan ku yaalla degaanka Ambareeso oo ku yaalla albaabka laga galo degmada Baraawe […]
Xarakada Al-Shabaab oo Gacanta Ku Dhigtay Dayuurad Mareykanku Leeyahay.
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta gacanta ku dhigay dayuurad nooca wax basaasa ah oo kusoo dhacday duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose. Dayuuraddan oo la rumeysan yahay in uu Mareykanku leeyahay ayaa waxaa qaatay askarta Xarakada Al-Shabaab sida aan kasoo xigay dad xog ogaal ah. Dayuuradaha wax basaasa ee […]
Col. Cabdullaahi Yare Oo Lagu Dilay Qarax Ka Dhacay Muqdisho.
Abaaro tobankii barqanimo ee maanta waxaa degmada Hodan ee magaalada Muqdisho lagu weeraray saraakiil ka tirsan dowladda federalka ah oo gaari saarnaa. Saraakiishan oo ka tirsan kuwa milatariga ayaa waxaa waxaa qarax culus lagula beegsaday Tarabuunka, waxaana inta la hubo weerarkan ku dhintay hal sarkaal oo la oran jiray Korneyl […]
Gaari Dagaal oo Xabashida Looga Gubay Gobolka Bay.
Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in gaari dagaal oo qeyb ka ahaa kolonyo ciidamada Xabashida ah iyo askartii saarnayd la gubay kadib markii lala beegsaday qarax aad u culus. Kolonyadan ayaa waxaa lagu beegsaday degmada Bardaale ee gobolka Bay xilli ay socdaal ku jireen, waxaana la xaqiijiyay […]
GUARDIAN: 50 Ruux Oo Shacab Ah Ayaa Dhimasho & Dhaawac Ku Noqday Duqeymaha Cirka Ee Shisheeyaha
Tobanaan ruux oo shacab ah ayaa lagu dilay laguna dhaawacay Soomaaliya xilli duqeymaha xagga cirka ee ay geysanayaan diyaaradaha Mareykanka ay sanadkan u kordheen si aanan horay loo arag sida lagu sheegay baaritaan iyo dabagal uu sameeyey Wargeyska Guardian ee laga leeyahay dalka Ingiriiska, Waxaana talaabadan lagu tilmaamayaa mid sii […]
Madaxweynaha dowladda federalka ah oo labadii usbuc ee lasoo dhaafay socdaalo ku marayay qaar kamid ah gobolada Wuqooyi bari iyo degmooyin ka tirsan gobolada dhexe ayaa maalintii shalay kusoo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu soo gabagabeeyay safarkiisii. Sida ku cad warqad loo diray Fahad Yaasiin oo ah agaasimaha madaxtooyada, […]
Madaxweynaha dowladda federalka ah Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu heshiis dhex dhigay magaalooyinka Dhuusomreeb iyo Cadaado oo ay siyaasiyiintoodu ku loolamayeen halka caasimadda laga dhigayo iyo arrimo kale oo maamulka la xiriira. Farmaajo ayaa ugu dambeyntii magaalada Cadaado ka dheegay in uu soo go’aamiyay iney Cadaado noqoto xarunta Baarlamaanka, […]
Dagaallo iyo duqeymo ayaa dib uga qarxay deegaanno katirsan Gobolka Sh/Hoose oo shalay ay ka dhaceen dagaallo khasaara xooggan lagu gaarsiiyay ciidamada AMISOM. Wararka ka imaanaya duleedka magaalada Marka ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab xalay weeraro loo adeegsaday madaafiic ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada AMISOM ku leeyihiin deegaannada NO.60 […]
Gudoomiyihii Ceelbuur Iyo Ilaaladiisii oo Muqdisho Duleedkeeda Lagu Dilay.
Weerar ay Xarakada Al-Shabaab ka geysatay duleedka magaalada Muqdisho galinkii dambe ee maanta ayaa waxaa ku dhintay gudoomiyihii dowladda ugu magacawnaa degmada Ceelbuur iyo ilaaladiisii. Gaari Qooqan ah oo ay saarnaayeen ayaa waxaa qarax lagula beegsaday degaanka KM13 ee duleedka magaalada Muqdisho xilli uu socdaal ku jiray, waxaana ay goob […]